Facebook Cele ပနျဆယျလိုကို ဒဲ့စိနျချေါလိုကျတဲ့ စာရေးဆရာ ကြျောကွီး(Mdy) – Daily Feed MM
Facebook Cele ပနျဆယျလိုကို ဒဲ့စိနျချေါလိုကျတဲ့ စာရေးဆရာ ကြျောကွီး(Mdy)
Admin_John | June 13, 2020 | Local News | No Comments
◾️ပနျဆယျလိုအကောငျ့က ကြှနျတျောကို ၆၆ ဃ နဲ့ ဗဟနျးရဲစခနျးမှာ အမှုဖှငျ့ထားတယျတဲ့အငျး ဘာပွောရမှနျးတော့မသိအောငျ ဆှံ့အမိ ။ ငိုရမလို ရီရမလိုပဲ။တဈတိုငျးပွညျလုံးကို ဘုနျးကွီးပါမကနျြ အားမနာလြှာမကြိုး ဝဖေနျထောကျပွနျနသေူက သူ့အလှညျ့ကွတော့ မနိုငျတာနဲ့ ရဲနဲ့ပွေးတိုငျတယျတဲ့။ အျော တရားကဖြို့ကောငျးလိုကျတာ။
၆၆ ဃ ဆိုတာ ဘယျလိုပုဒျမမြိုးဆိုတာ ပွညျသူအားလုံး သိပီးသား။ ပွညျသူအပျေါမတရားတဲ့ အာဏာရှငျပုဒျမဆိုပွီး ဖကျြသိမျးပေးဖို့ ပွညျသူအားလုံးရော လှတျတျောထဲမှာပါ တောငျးဆိုခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။
အာဏာရှငျတှကေို မုနျးတီးတယျ ဒီမိုကရစေီပျေါပေါကျဖို့ တိုကျပှဲဝငျနတေယျဆိုတဲ့ ဒီမိုဘကျတျောသားဆိုသူက ကိုယျ့ဝဖေနျတော့ အာဏာရှငျတှေ ပွဌာနျးခဲ့တဲ့ ပုဒျမသုံးပွီး တရားစှဲတယျတဲ့။ ဒါတောငျ ခွဥေပွငျခငျြသေးတာဆိုပဲ။ သွျော အေးအေးကာယကံရှငျကိုယျတိုငျ သူမြားကိုဝဖေနျလို့ လကျရှိ ၆၆ ဃ နဲ့ တရားစှဲခံထားရတော့ ပိုနားလညျးသဘောပေါကျမယျထငျပါတယျ။
ခုလိုပွောနတော ကွောကျလို့ပွောနတောမဟုတျဘူးနျော။ ပွညျသူတှသေိထားဖို့ ခပြွတာ။ ကနြျောရေးထားကွောငျး ၀နျခံပွီးသား။ ပို့ဈလညျးမဖကျြဘူး။ ထှကျလညျးမပွေးဘူး။ကနြျောရေးထားတဲ့ အခကျြထဲမှာ မှားတာ တဈခကျြမှမပါဘူး။ ဆဲထားတာ တဈခုမှ မပါဘူး၊ ပါဆငျနယျတိုကျခိုကျထားတာမဟုတျပါဘူး။ အမြားအသိပညာတိုး သင်ျခနျးစာယူနိုငျစဖေို့ ဆိုတာ အားလုံးသိပွီးသား။
မှားတာ လုပျကွံပွောထားတာ တဈခကျြပါတယျဆိုရငျထောကျပွလိုကျ တရားစှဲမနနေဲ့ ကိုယျ့ဘာသာမီးရှို့သတျသလေိုကျမယျ။ ရှငျးတယျနျောကြျောကွီးဆိုတာက ဂုဏျသိက်ခာကို အသကျထကျတနျဖိုးထားတဲ့သူ။
စာပမေီဒီယာလောက၊ စီးပှားရေးလောက၊ နိုငျငံရေးလောက ကွိုကျတဲ့နရောစုံစမျး မတရားတာ မဟုတျတာ လုပျထားတာတဈခုမရှိဘူးပွညျသူကို အဆိပျမခတျဘူး ကိုယျ့ကွောငျ့ အမြားဒုက်ခမရောကျဖူးဘူး။
မဟုတျတမျးတရားတှရေေးပီး ပို့ဈဖကျြမပွေးဖူးဘူး။ ဆဲဆိုမမိုကျရိုငျးဖူးဘူး။ သူမြားစာ ခိုးမခဖြူးဘူး။စာပမေီဒီယာဗနျးပွ ကိုယျကြိုးရှာလုပျစားနသေူမဟုတျဘူး။ အာဏာပိုငျအစိုးရ ဖျောလံဖားပီး ထမငျးစားနသေူမဟုတျဘူး။
အကောငျ့ပုနျးနဲ့ သုံးပွီမှ ခတျေကောငျးမှ လူလုံးထှကျပွသူမဟုတျဘူး။ကွိုကျတဲ့သမိုငျးခငျြး ယှဉျရိုကျလို့ရတယျ။ ကွိုကျတဲ့သူလာခဲ့ဒီနအေ့ထိ ကိုယျကြိုးမဖကျ ပွညျသူဘကျကရပျတညျ မတရားမှုတှကေို လိပျပွာသနျ့စှာနဲ့ ထောကျပွတှနျးလှနျခဲ့တယျ။
ကိုယျ့ကိုယျလညျး ကွိုကျသလိုဝဖေနျထောကျပွလို့ရတယျ။ သူမြားကို အားမနာတနျးဝဖေနျပွီး ကိုယျ့ထောကျပွမှ မနိုငျလို့ ရဲပွေးတိုငျတာမြိုးတဈသကျလုံး မလုပျခဲ့ဘူး။ကြျောကွီးသာ အရှကျမရှိတရားစှဲခဲ့ရငျ အစကတညျးက ခငျဗြားတို့တဈဖှဲ့လုံး စှဲခဲ့ပွီပေါ့ . . .
ကြျောကွီးက အရှကျနဲ့လူလုပျတာပါ။ရှဆေ့ကျပွီးလညျး အမှနျတရားနဲ့ ပွညျသူ့ဘကျက အမွဲရပျတညျသှားမယျ။ ဒါပဲ။
Original Post – https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3432716223434051&set=a.486454228060280&type=3&theater
◾️ပန်ဆယ်လိုအကောင့်က ကျွန်တော်ကို ၆၆ ဃ နဲ့ ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်ထားတယ်တဲ့အင်း ဘာပြောရမှန်းတော့မသိအောင် ဆွံ့အမိ ။ ငိုရမလို ရီရမလိုပဲ။တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို ဘုန်းကြီးပါမကျန် အားမနာလျှာမကျိုး ဝေဖန်ထောက်ပြန်နေသူက သူ့အလှည့်ကြတော့ မနိုင်တာနဲ့ ရဲနဲ့ပြေးတိုင်တယ်တဲ့။ အော် တရားကျဖို့ကောင်းလိုက်တာ။
၆၆ ဃ ဆိုတာ ဘယ်လိုပုဒ်မမျိုးဆိုတာ ပြည်သူအားလုံး သိပီးသား။ ပြည်သူအပေါ်မတရားတဲ့ အာဏာရှင်ပုဒ်မဆိုပြီး ဖျက်သိမ်းပေးဖို့ ပြည်သူအားလုံးရော လွှတ်တော်ထဲမှာပါ တောင်းဆိုခဲ့တာ အားလုံးအသိပါ။
အာဏာရှင်တွေကို မုန်းတီးတယ် ဒီမိုကရေစီပေါ်ပေါက်ဖို့ တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုဘက်တော်သားဆိုသူက ကိုယ့်ဝေဖန်တော့ အာဏာရှင်တွေ ပြဌာန်းခဲ့တဲ့ ပုဒ်မသုံးပြီး တရားစွဲတယ်တဲ့။ ဒါတောင် ခြေဥပြင်ချင်သေးတာဆိုပဲ။ သြော် အေးအေးကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင် သူများကိုဝေဖန်လို့ လက်ရှိ ၆၆ ဃ နဲ့ တရားစွဲခံထားရတော့ ပိုနားလည်းသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။
ခုလိုပြောနေတာ ကြောက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ပြည်သူတွေသိထားဖို့ ချပြတာ။ ကျနော်ရေးထားကြောင်း ၀န်ခံပြီးသား။ ပို့စ်လည်းမဖျက်ဘူး။ ထွက်လည်းမပြေးဘူး။ကျနော်ရေးထားတဲ့ အချက်ထဲမှာ မှားတာ တစ်ချက်မှမပါဘူး။ ဆဲထားတာ တစ်ခုမှ မပါဘူး၊ ပါဆင်နယ်တိုက်ခိုက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ အများအသိပညာတိုး သင်္ခန်းစာယူနိုင်စေဖို့ ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသား။
မှားတာ လုပ်ကြံပြောထားတာ တစ်ချက်ပါတယ်ဆိုရင်ထောက်ပြလိုက် တရားစွဲမနေနဲ့ ကိုယ့်ဘာသာမီးရှို့သတ်သေလိုက်မယ်။ ရှင်းတယ်နော်ကျော်ကြီးဆိုတာက ဂုဏ်သိက္ခာကို အသက်ထက်တန်ဖိုးထားတဲ့သူ။
စာပေမီဒီယာလောက၊ စီးပွားရေးလောက၊ နိုင်ငံရေးလောက ကြိုက်တဲ့နေရာစုံစမ်း မတရားတာ မဟုတ်တာ လုပ်ထားတာတစ်ခုမရှိဘူးပြည်သူကို အဆိပ်မခတ်ဘူး ကိုယ့်ကြောင့် အများဒုက္ခမရောက်ဖူးဘူး။
မဟုတ်တမ်းတရားတွေရေးပီး ပို့စ်ဖျက်မပြေးဖူးဘူး။ ဆဲဆိုမမိုက်ရိုင်းဖူးဘူး။ သူများစာ ခိုးမချဖူးဘူး။စာပေမီဒီယာဗန်းပြ ကိုယ်ကျိုးရှာလုပ်စားနေသူမဟုတ်ဘူး။ အာဏာပိုင်အစိုးရ ဖော်လံဖားပီး ထမင်းစားနေသူမဟုတ်ဘူး။
အကောင့်ပုန်းနဲ့ သုံးပြီမှ ခေတ်ကောင်းမှ လူလုံးထွက်ပြသူမဟုတ်ဘူး။ကြိုက်တဲ့သမိုင်းချင်း ယှဉ်ရိုက်လို့ရတယ်။ ကြိုက်တဲ့သူလာခဲ့ဒီနေ့အထိ ကိုယ်ကျိုးမဖက် ပြည်သူဘက်ကရပ်တည် မတရားမှုတွေကို လိပ်ပြာသန့်စွာနဲ့ ထောက်ပြတွန်းလှန်ခဲ့တယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်လည်း ကြိုက်သလိုဝေဖန်ထောက်ပြလို့ရတယ်။ သူများကို အားမနာတန်းဝေဖန်ပြီး ကိုယ့်ထောက်ပြမှ မနိုင်လို့ ရဲပြေးတိုင်တာမျိုးတစ်သက်လုံး မလုပ်ခဲ့ဘူး။ကျော်ကြီးသာ အရှက်မရှိတရားစွဲခဲ့ရင် အစကတည်းက ခင်ဗျားတို့တစ်ဖွဲ့လုံး စွဲခဲ့ပြီပေါ့ . . .
ကျော်ကြီးက အရှက်နဲ့လူလုပ်တာပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးလည်း အမှန်တရားနဲ့ ပြည်သူ့ဘက်က အမြဲရပ်တည်သွားမယ်။ ဒါပဲ။
မွနျမာတဈနိုငျငံလုံး တက်ကသိုလျဝငျတနျး (သိပ်ပံတှဲ )ပထမ ဆုရှငျ ထှကျပျေါလာ
အိမျရှငျမတှကေို စိတျညဈစတေဲ့ဆနျပိုးမြားမလာအောငျ ကာကှယျနညျး